Puntland oo Mowqif Adag ka Istaagtay in Xayiraad la Saaro Shidaalka Somalia – Radio Daljir
Oktoobar 12, 2015 6:43 b 0
Isniin, Oktoobar 12, 2015 (Daljir) —Hay’ada dhanka shidaal baarista iyo macdanta u qaabilsan dowladda Puntland ayaa kasoo horjeesatay soo jeedinta Qaramada Midoobey ee ah in xayiraad lasaaro shidaalka Soomaaliya si uusan xaaladda ammaan ee wadanka usii khalkhal gelin.
Ciise Maxamed Faarax (Dhoola-waa) agaasimaha Hay’ada Batroolka iyo macdanta ee dowladda Puntland ayaa sheegay in dowladda Puntland aysan aqbali doonin tallaabo kasta oo lagu doonayo in lagu waxyeeleeyo qaranimada Soomaaliyeed.
Mudane Dhoola-waa oo lahadlayey bogga Bloomberg ayaa sheegay in Qaramada Midoobey ay ku khaldantahay inay xayiraad saarto wadan kasoo kabanaya colaad sokeeye dhalinyaradiisiina ay shaqo la’aan yihiin una baahan yihiin khayraadka wadanka looga faa’iideeyo.
Warbixin cusub oo ku saabsan Soomaaliya oo kooxda dabagalka hubka ee Qaramada Midoobay ay soo saari rabto bartamaha bishan ayaa ku celisay talo soo-jeedin ay sameysay 2013 oo ah in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu mamnuuco heshiisyada ganacsiga shidaalka iyo saliidda Soomaaliya.
Kooxdaan ayaa sheegtay in Soomaaliya aysan lahayn qaab sharciyeysan oo ay ku baari karto shidaalkeeda, waxaana horay ugu gacan sayray dowladda federalka ah ee Soomaaliya iyo Hay’ada Soma Oil and Gas Holdings ee wadanka London.